Gwuo ahia | January 2020
Play Market bụ otu n'ime njikọ njikọ nke sistemụ arụmọrụ si na Google, n'ihi na ọ bụ ya na ndị ọrụ na-achọta ma wụnye egwuregwu na ngwa ọhụrụ, ma mezie ha. N'ọnọdụ ụfọdụ, akụkụ a dị mkpa nke Os na-akwụsị ịrụ ọrụ nke ọma, na-ajụ ịrụ ọrụ isi ya - nbudata na / ma ọ bụ imelite ngwa.
Nchọpụta nsogbu 20 na Ụlọ Ahịa Play
Ụlọ ahịa Google Play, nke jikoro n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ niile gam akporo, bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nyocha, nbudata, wụnye na imelite ngwa na egwuregwu. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ahịa a na-arụ ọrụ siri ike ma na-enweghị ọdịda, ma mgbe ụfọdụ, ndị ọrụ na-ahụ nsogbu ụfọdụ.
Nchọpụta koodu njehie 505 na Ụlọ Ahịa Play
"Unknown error code 505" bụ onye wetara ngosi, nke mbụ zutere site nwe nke Google Nexus usoro ngwaọrụ, emelitere site gam akporo 4.4 KitKat ka version 5.0 Lollipop. Enweghi ike ịkpọ nsogbu a ogologo oge, ma na-ele iji igwe smartphones na mbadamba nkume na 5th Android n'ụgbọ, o doro anya na ọ dị mkpa ikwurịta banyere ngwọta ya.
Ịkwụsị mmejọ "Download Download" na Play Market
Nzọụkwụ 1: Malitegharịa ngwaọrụ ahụ Ka ọtụtụ njehie nwere ike ime site na obere usoro ọdịda, nke nwere ike idozi ya site nlọghachi ngwa ngwa nke ngwa. Malitegharia ngwaọrụ gị ma gbalịa ịnata ma ọ bụ na-emelite ngwa ahụ ọzọ. Usoro 2: Chọọnụ njikọ Ịntanetị dị mma Ihe ọzọ nwere ike ịbụ njikọ Ịntanetị na-ezighị ezi na ngwaọrụ ahụ.
Ọrụ ntanetị Google Play nsogbu
Mgbe ị na-eji ngwaọrụ ya na sistemụ arụmọrụ gam akporo, window window nwere ike ịpụta mgbe ụfọdụ, na-agwa gị na njehie dị na ngwa Google Play Ọrụ. Atụla ụjọ, nke a abụghị njehie dị oke egwu ma nwee ike idozi ya na nkeji ole na ole. Gbanye ahụhụ n'ime ngwa Google Play Ọrụ. Iji wepu njehie, ịkwesịrị ịchọpụta ihe mere o si malite, nke nwere ike zoo n'ime ihe kachasị mfe.
Idozi njehie na koodu 927 na Ụlọ Ahịa Play
"Error 927" na-egosi na mgbe enwere mmelite ma ọ bụ ibudata ngwa site na Play Market. Ebe ọ bụ na ọ bụ ihe nkịtị, ọ gaghị esiri ike idozi ya. Idozi njehie na koodu 927 na Ụlọ Ahịa Play. Iji dozie nsogbu ahụ na Error 927, ọ bụ naanị iji nweta ngwaọrụ n'onwe ya na nkeji ole na ole.
Ụlọ ahịa Google Store Iweghachite na gam akporo
Ụlọ Ahịa Google na-enye ike ịchọ, wụnye na melite ngwa na egwuregwu dị iche iche na smartphones na mbadamba na Android, ma ọ bụghị ndị ọrụ niile na-aghọta uru ọ bara. Ya mere, site na ohere ma ọ bụ nke ọma, a ga-ehichapụ ụlọ ahịa dijitalụ, mgbe nke a gasịrị, nwere nnukwu ihe ịga nke ọma, ọ ga-adị mkpa iji weghachi ya.
Tinye "Error Code 963" na Market Play
Ọ bụrụ na ịchọta ajọ omume 963 mgbe ị na-eji Ụlọ Ahịa Store Store, echegbula - nke a abụghị nsogbu dị egwu. Enwere ike idozi ya n'ụzọ dị iche iche nke na-anaghị achọ ka itinye oge na mgbalị siri ike. Idozi Error 963 na Play Market E nwere ọtụtụ ngwọta maka nsogbu ahụ.
Idozi njehie na koodu DF-DFERH-0 na Ụlọ Ahịa Play
Mgbe nbudata ma ọ bụ emelite ngwa na Ụlọ Ahịa Play, zutere "ezighị ezi DF-DFERH-0"? Ọ dịghị mkpa - a edozila ya n'ọtụtụ ụzọ dị mfe, nke ị ga-amụta n'okpuru ebe a. Anyị na-ewepu koodu DF-DFERH-0 na Ụlọ Ahịa Play.Ma ọ bụ ihe kpatara nsogbu a bụ ọdịda nke ọrụ Google, ma wepụ ya, ịkwesịrị ịdị ọcha ma ọ bụ regharịa ụfọdụ data metụtara ha.
Idozi njehie RH-01 na Ụlọ Ahịa Play
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na "Error RH-01" pụtara mgbe ị na - eji ọrụ Play Store? O yiri ka ọ bụ njehie mgbe ị weghachite data sitere na sava Google. Iji dozie ya, gụọ ntụziaka ndị a. Izizi njehie na koodu RH-01 na Ụlọ Ahịa Play E nwere ọtụtụ ụzọ iji nyere aka wepu njehie ahụ asị.
Rịba 504 na Ụlọ Ahịa Google
Market Google Market, ịbụ otu n'ime akụkụ ndị kachasị mkpa nke sistemụ arụmọrụ Android, anaghị arụ ọrụ mgbe niile. Mgbe ụfọdụ na usoro nke eji ya, ị nwere ike iche ụdị nsogbu niile. N'ime ndị ahụ na njehie na-ezighị ezi na koodu 504, iwepụ nke anyị ga-agwa taa. Njehie njehie: 504 na Ụlọ Ahịa Play Ọtụtụ ugboro, njehie egosipụtara na-eme mgbe ị na-etinye ma ọ bụ na-emelite ngwa Google a ma ama na ụfọdụ ihe omume atọ nke chọrọ ka ha jiri ndebanye akaụntụ na / ma ọ bụ ikike na nke ahụ.
Wepụ Google Play Market site na ngwaọrụ gam akporo gị
N'agbanyeghị uru niile Google Play na-enye ndị nwe ngwaọrụ gam akporo, n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-adị mkpa ka ị kwụsị ngwa ngwa a na ngwa ngwa. Iji dozie nsogbu a n'ọtụtụ ọnọdụ, onye ọrụ ahụ ga-agbaso ụzọ dị iche iche nke ịme ihe.
Njehie njehie 492 mgbe nbudata ngwa si Ụlọ Ahịa Play
Ndị na-arụ ọrụ nke smartphones android nwere ike ịnweta ụdị njehie dị iche iche mgbe ụfọdụ, na mgbe ụfọdụ, ha na-ahụ kpọmkwem na sistemụ arụmọrụ - Ụlọ Ahịa Google Play. Nke ọ bụla n'ime njehie ndị a nwere koodu nke aka ya, nke ọ dị mkpa iji chọpụta ihe kpatara nsogbu na nhọrọ maka idozi ya. Kpọmkwem n'isiokwu a, anyị ga-atụle otu esi ewepu njehie 492.
"Error Code 905" na Ụlọ Ahịa Play
Play Market bụ nnukwu ụlọ ahịa ngwa ngwa nke ọtụtụ nde mmadụ na-eji kwa ụbọchị. Ya mere, ọrụ ya nwere ike ọ gaghị adịgide mgbe niile, mgbe ụfọdụ njehie dị iche iche na nọmba ụfọdụ nwere ike ịpụta na nke ị nwere ike ịchọta ngwọta maka nsogbu ahụ. Izizi "Error Code 905" na Ụlọ Ahịa Play E nwere ọtụtụ nhọrọ ga-enyere tufuo njehie 905.
Nchọpụta nsogbu 403 na Ụlọ Ahịa Play
Ngwá ọrụ sistemụ arụmọrụ bụ ka zuru oke, site n'oge ruo n'oge, ndị ọrụ na-eche ọdịda dị iche iche na njehie na ọrụ ya. "Emezighi ngwa ibudata ngwa a ... (Error code: 403)" - otu n'ime nsogbu ndị a na-adịghị mma. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya ihe kpatara ya na otu esi ewepu ya.
Esi mee ka Ụlọ ahịa Play
Mgbe ịzụtara ngwaọrụ na sistemụ arụmọrụ gam akporo, nke mbụ ị chọrọ ibudata ngwa achọrọ site na Play Market. Ya mere, na mgbakwunye na akaụntụ ụlọ ọrụ dị na ụlọ ahịa, ọ dịghị afụ ụfụ iji chọpụtakwa ntọala ya. Hụkwa: Otu esi edebanye aha na Play Market hazie Market Market Ọzọ, anyị na-atụle isi ihe ndị na-emetụta ọrụ ahụ na ngwa ahụ.
Ịkwụsị njehie 907 na Ụlọ Ahịa Play
Mgbe nbudata ma ọ bụ emelite ngwà ahụ na Ụlọ Ahịa Play, "Error 907" nwere ike ịpụta. Nke a apụtaghị na ọ ga-esi na ya pụta, ọ pụkwara iwepụ ya n'ọtụtụ ụzọ dị mfe. Anyị na-ekpochapụ koodu nje 907 na Ụlọ Ahịa Play.Ọ bụrụ na ihe ngwọta dị mma n'ụdị nlọghachite ngwaọrụ ma ọ bụ na-agbanye / gbanyụọ njikọ Ịntanetị adịghị enye nsonaazụ, mgbe ahụ ntụziaka dị n'okpuru ga-enyere gị aka.
"Njehie 924" n'ọtụtụ ọnọdụ na-egosi na Ụlọ Ahịa Play n'ihi nsogbu na ọrụ nke ọrụ onwe ha. Ya mere, a pụrụ imeri ya n'ọtụtụ ụzọ dị mfe, nke a ga-atụle n'okpuru. Idozi njehie na koodu 924 na Ụlọ Ahịa Play Ọ bụrụ na ị na-enweta nsogbu n'ụdị "Error 924", weere usoro ndị a iji kpochapụ ya.
Codex nsogbu 491 na Ụlọ Ahịa Play
"Njehie 491" pụtara n'ihi njuju nke ngwa ngwa nke Google na cache nke data dị iche iche echekwara mgbe iji Ụlọ Ahịa Play. Mgbe ọ na-abawanye, ọ nwere ike ime ka ọ bụrụ njehie mgbe nbudata ma ọ bụ emelite ngwa ọzọ. E nwekwara oge mgbe nsogbu ahụ bụ njikọ Ịntanetị na-adịghị agwụ ike.
Ịwụnye Google Play Market na ngwaọrụ gam akporo gị
Dị ka ị maara, Google Play Market bụ otu n'ime usoro ngwanrọ kacha mkpa dị n'ime usoro arụmọrụ gam akporo. Ọ bụ site na ngwa ngwa a na ọtụtụ ndị ọrụ nke Android smartphones na mbadamba wụnye dị iche iche software na ngwá ọrụ na ha ngwaọrụ, na enweghi a Play Store kpọrọ narrows ndepụta nke ike nke ndị nwe ụlọ ọrụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Gwuo ahia 2020